FALANQEYN:- Musharixiinta ku tartameysa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
FALANQEYN:- Musharixiinta ku tartameysa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya
Waxaa daqiiqadaha soo socdo la filayaa in doorashada guddoomiye ku-xigeenada koowaad iyo labaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay ka bilaabato xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho.
Musharixiinta ku tartameeysa xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad oo gaaraya illaa 6 musharax ayaa noqon doona kuwa loolan adag dhex-maro, waxaana seddax ka mid ah musharixiintaasi ay yihiin kuwa ugu cad-cad doorashada, halka qaarka kalena ay u muuqdaan kuwa boos buuxis ah.
Gelinka dambe ee maanta ayaa lagu wadaa inay gebi ahaan soo gaba-gaboowdo doorashada guddoonka koowaad iyo labaad ee baarlamaanka Soomaaliya, iyadoona markii la doorto labadaasi guddoomiye ku-xigeen maalmaha soo socdo la guddo gali doonaan isku diyaarinta doorashada madaxweynaha Soomaaliya.
Musharaxiinta maanta ku tartameeysa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kala ah:-
1- Faarax Sheekh C/qaadir
Wuxuu Faarax Sheekh C/qaadir ku dhashay magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan sanadkii 1966-dii, aqoon ahaan wuxuu heystaa laba shahaado oo Master-ka oo kala ah maamulka iyo maareynta ee machadka (ESAMI)-Arusha iyo mid kale uu ka qaatey Jaamacadda Islamabad ee dalka Pakistan, isagoo bartey sharciga iyo qaanuunka.
Faarax Sheekh C/qaadir ayaa kasoo shaqeeyay hay’ado Samafal sida Africa Muslim Agency xafiiskeeda Soomaaliya oo uu madax ka ahaa 1992-2007, wuxuu siyaasadda kusoo biiray 2012-kii, isagoo noqday xildhibaan, kadibna wuxuu 2013-kii qabtay jagooyinka wasiiru dowlaha madaxtooyada Soomaaliya iyo wasiirka garsoorka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya.
Khudbadii musharaxnimada ee uu Faarax Sheekh C/qaadir dhawaan kahor jeediyay xildhibaanada baarlamaanka ayaa ahayd tii ugu saameynta badneyd oo si weyn loogu faafiyay baraha bulshada, waxaana saadaashu tahay inuu safka hore ku jiro, kuna guuleysan karo xilkaan, balse ay dhici karto inay si kale wax u dhaceen marka la eego mucaaradada ka dhex jirta musharixiin badan oo saameyn ku leh qeyb ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka.
2- Khadiija Maxamed Diiriye
Khadiijo Maxamed Diiriye waxay ku dhalatay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya sanadkii 1964-ka, waa hooyo leh 5 caruur ah, Jaamacadda Hope waxay 2014-kii ka qaadatey shahaadada koowaad ee Public Adminstration.
Waxay Khadiijo xildhibaan noqotay dowladdii Carte 2000, iyadoo illaa iyo iminka kursiga ku fadhida, waxay sidoo kale soo qabatay xilal kala duwan oo ay ka mid yihiin wasiir ku-xigeen iyo wasiir.
Waa markii ugu horeeysay oo haweenay Soomaaliyeed ay isku soo sharaxdo xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka, iyadoona la ogyahay inay arrintaasi kuhor gudban tahay caqabado diini ah iyo kuwo bulshadeed,
Inkastoo Khadiija Maxamed Diiriye ay shacbiyad aan yareyn ku leedahay baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa haddana waxaa laga cabsi qabaa inaysan xilkan kusoo bixin.
3- Jeylaani Nuur Iikar
Jeylaani Nuur Ikar Sheekh Suufi wuxuu ku dhashay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya sanadkii 1955-ta, wuxuuna sanadkii 1978-ka kasoo baxay Jaamacadda umadda isagoo bartay dhaqaalaha.
1980-kii wuxuu maamul iyo maareynta kasoo bartay Akaadimiyad Talyaaniga ku taallo. waxaana shaqooyinka uu soo qabtay ugu muhiimsan xoghayaha guud ee ururkii SANU.
Wixii ka dambeeyay sanadkii 2008-ka wuxuu xubin kasoo noqday baarlamaanka Soomaaliya, waxaana guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka loo doortay 2012-ka.
Jeylaani Nuur Iikar wuxuu dhibaato kala kulmay inuu dib ugu soo laabto baarlamaanka cusub, waxaana la saadaalinayaa inuusan codad badan ka heli doonin xildhibaanada baarlamaanka islamarkaana kusoo bixi doonin jagadda uu haatan doonayo inuu mar labaad ku guuleysto.
4- C/weli Sheekh Ibraahim Muudey
C/weli Sheekh Ibraahim Muudey wuxuu dhashay sanadkii 1964-ta isagoona ku dhashay degmada Qoryooley ee gobolka Sh/hoose, wuxuu ka qalin jabiyay machadka SIDAM 1988-dii, xilalka uu soo qabtayna waxaa ugu muhiimsan isagoo 2004-kii ka mid noqday xildhibaannada dowladdii KMG aheyd.
Sanadkii 2012-2010 waxaa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya, wuxuu 2012-ka soo noqday xildhibaan, isagoona sidoo kale soo noqday wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee Soomaaliya.
Musharax C/weli Sheekh Ibrahim Muudey oo gacan saar la leh madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan ayaa ka mid ah musharixiinta ugu cadcad xilkaan, waxaase caqabad weyn ku ah taariikhdiisii hore ee baarlamaankii KMG ahayd, taas oo ka reebtay in mar kale la doorto sanadkii 2012.
Waxaa la saadaalinayaa in hadii C/weli Sheekh Ibraahim Muudey uu soo gaaro wareegyadda dambe inay isku soo hari doonaan isaga iyo Faarax Sheekh C/qaadir, kadibna ay guushu raacdo musharaxa aan mucaarad badan ku lahayn xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya.
5- Khaalid Macoow C/qaadir
Khaalid Macoow C/qaadir wuxuu ku dhashay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya sanadkii 1950-ka, wuxuuna aqoontiisa ka qalin jebiyay Jaamacadda Urbino iyo Akaadimeiyadda fanka ee Ravenna iyo taqasusaadkiisa Saxaafadda uu ka bartey Urbino Italy.
Shaqooyinka uu soo qabtay Khaalid Macoow waxaa ka mid ah inuu macalim ka ahaa Jaamacadda Umadda, Jaamacadda Sanca iyo Jaamacadda Bologna, wuxuu kaloo noqdey agaasimaha waaxda warfaafinta ee xisbigii XHKS. Golihii shacabka 1985-1990, wuxuu sidoo kale tifaftire kasoo noqdey Ogaal iyo Kasmo.
Khaalid Macoow waa aqoonyahan qunyar socod ah oo la saadaalinaayo inuusan meel fiican ka geli doonin doorashada guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya.
6- Saciid Xuseen Ciid
Saciid Xuseen Ciid, wuxuu dhashay sanadkii 1973, wuxuuna shahaahada Master ka diyaariyay American International Open University ee Qaahira, India ayuu labo Master ka diyaariyay, shaqada waxaa ugu muhiimsanaa 2016 waxaa uu 2014-ahaa wasiirka xanaanada xoolaha, waxaa kaloo uu muddo ka shaqeeyey rugaha ganacsiga dalka sida Puntland.
Saciid Xuseen Ciid waxa uu ka soo jeedaa beelaha shanaad ee dega Puntland, waana markii ugu horeeysay ee shaqsi la mid ah isku sharaxo xilkaan, waxaana la filayaa in codadka uu helo aysan ku filnaan doonin guul uu ka gaaro doorashada haatan sida tooska ah u socota.